Boqol ruux oo tahriibayaal Soomaali ah oo lugu qabtay dalka Sudan. | Shacabka Puntland	Monday, February 20th, 2017	Home
Boqol ruux oo tahriibayaal Soomaali ah oo lugu qabtay dalka Sudan.
Jan 9, 2017 - Post View: 3,268
Ciidamada ammaanka dalka Sudan ayaa gacanta ku dhigay ku dhawaad 115 rux, dadka 101 ruux oo ka mid ah waa Soomaali, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda.
Dadkan waxaa la qabtay iyagoo doonaya inay ka gudbaan dhulka saxaraha ah ee isku xira dalalka Sudan iyo Liibiya, halka oo inta badan dadka tahriibayaasha ah ay uga gudbaan waddamada Yurub, iyagoo ka tallaabaya biyaha isku xira Afrika iyo Yurub.
Inta badan dadka Soomaalida ah ee ciidamada ammaanka Sudan ay xiran, waxaa ay da’dooda u dhaxeysa 18 jira illaa 25 jir, waxaana ku jira dadka la qabtay 34-dumar Soomaali ah iyo afar iyo toban ruux oo Itoobiyaan ah.
“Ciidamada ammaanka waxaa ay howlgal gaar ah ka sameeyeen dhulka saxaraha ah ee isku xira Liibiya iyo Sudan, waxaana lugu soo qabtay 115 ruux oo 101 ay yihiin Soomaali, waxaa ku jira 34 dumar Soomaali ah,” ayuu yiri sarkaal u hadlayay ciidamada ammaanka Sudan.
Howlgalladan ayaa la sheegay inuu sii socon doonan, kaddib markii ay kordheen dadka tahriibayaasha ah ee soo gaaraya Sudan, kuwaasoo qaarkood ku dhuumaleysanaya gudaha magaalooyinka dalkaas.
Saddexdii sanno ee ugu dambeysay tirada ugu badneyd oo Soomaali ah ayaa ka baxday dalkooda, kuwaaso tahriib ku galaya waddamada Yurub, badankooda waxaa ay maraan dalka Sudan oo ay uga gudbaan Liibaya, iyagoo marka doomo ku taga dalka Tayaaniga.